SmartMe - Smart Home အကြောင်းအရာအားလုံး၊ နည်းပညာအကြောင်းသတင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ
Apple က HomeKit
Philips က Hue
သင့်တိုက်ခန်းတွင် ရှုပ်ပွနေသည့်အခါ သင့်ကိုယ်သင် ပရိတ်သတ်တစ်ဦးရယူပါ။ 2022 နွေရာသီ အကျဉ်းချုပ်
ဇွန်လ 28 2022
အသံကြွယ်ဝသော Tronsmart Groove2ပြင်ပစပီကာ၊
စပီကာ, ကြိုးမဲ့စပီကာ, ထွန်း
မင်း ငါ့လို အပူဒဏ်ကို ခံနေသလား။ ဘာကြောင့် လေအေးပေးစက်မယူရတာလဲ။
Shopepepe InPosty ရှိ Shopeepeepee InPostytyty တွင် Shopee မှ ပါဆယ်အိတ်။
ဇွန်လ 27 2022
FIBARO & NICE, သတင်း, စမတ်နေအိမ်
Robo600 - လျှောတံခါးများကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Nice actuator အသစ်
Reolink သည် KEEN Camera အသစ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ယနေ့ ပြသရန်။
kamera, အပြင်ဘက်ကင်မရာ, ပြန်လာပြီ
Apple M13 ပါသော အခြေခံ MacBook Pro2သည် ၎င်း၏ ယခင်မျိုးဆက်ထက် နှေးကွေးသည်။
ပန်းသီး, ပန်းသီး m2, MacBook
TogetAir အစီရင်ခံစာအသစ်အတွက် အချိန်
Oclean Endurance - Oclean မှ နောက်ထပ် သွားတိုက်တံ
oclean, ဖြီး, Sonic သွားတိုက်
သွားတိုက်တံကို စမ်းသပ်ရတာ ကြိုက်တယ်။ ထို့ကြောင့် နောက်ထပ် Oclean သွားတိုက်တံကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် Oclean Endurance ကို ကျွန်ုပ်ထံ ပေးပို့ခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ် မအံ့သြပါ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသလား။ ငါလုပ်နိုင်မယ့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုလား...
ထုတ်ကုန်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆိုဒ်များတွင် ၀ ယ်ယူပါ။
ကျွန်တော့် MacBook ပြုတ်သွားပြီ၊ ဒါပေမယ့် အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Incase မှ MacBook အမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်နေပါသည်။
ဇွန်လ 25 2022
သင့် laptop ပြုတ်ကျတာ ဘယ်နှစ်ခါရှိပြီလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ကံမကောင်းစွာပဲ ဘူးခွံကို ခြစ်မိသွားအောင် ထားခဲ့တာလား။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ၊ အိမ်မပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပိုကြိုက်ပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ နာကျင်ပါတယ်။ ငါ့အတွက် အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကို တစ်ကြိမ်မဟုတ်၊ နှစ်ခါ၊ သုံးခါတောင် မဟုတ်ဘူး။
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, စမတ်နေအိမ်, Xiaomi မူလစာမျက်နှာ
Roborock Q7 Max+ - သန့်ရှင်းရေးလောကတွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
roborock, ဖုန်စုပ်စက်, Xiaomi, xiaomi အိမ်
Roborock ငါ့အိမ်တံခါးကို ပြန်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ Roborock S7 ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကို မကြာသေးမီက သင်ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး၊ ယနေ့တွင် သင့်အတွက် နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုရှိသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ စျေးသက်သာတဲ့ အစ်ကို Roborock Q7 Max+ အတွက် အချိန်ပါပဲ။ နာမည်တွင် အပေါင်းသည် ...
Roborock Q7 Max အဖြူရောင်
Roborock Q7 Max + အဖြူရောင်
အလုပ်မလုပ်ပါဘူး တစ်ခုခုလုပ်ဖို့သင်မသိဘူးလား။ ဒီမှာကြည့်ပါနှင့်မည်သို့လေ့လာသင်ယူ
နွေးတယ်... အရမ်းပူလို့ ဒီနေ့ ဆောင်းပါးရေးဖို့ ခက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏တိုက်ခန်းတွင် ကျွန်ုပ်၏အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးမည့် မည်သည့်ကိရိယာမှ မရှိတော့သောကြောင့် ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်း၊ ခန်းမနှင့် ...
သို့မဟုတ် Outlet မှဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ထိုသို့သော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိပါသလား။
ဇွန်လ 24 2022
Ole Ole, ထွက်ပေါက်, ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း
ငါဝယ်သမျှ အသစ်ဖြစ်ရမည်။ တကယ်ဖြစ်ရင်ကော? မကြာသေးမီက ကျွန်တော်သည် အသုံးပြုပြီးသား စက်ဘီးသယ်ဆောင်သူဖြစ်သည်။ ခြစ်ရာတစ်ခုရှိခြင်းအတွက် 600 zlotys လျှော့ပေးခဲ့တယ်... Sam၊ ကျွန်တော်ဟာ နီးပါးပစ္စည်းတွေကို မကြာခဏရောင်းပေးခဲ့တယ်..။
အဘယ်အရာကိုမြက် (နည်းပညာ) squeaks ၌တည်၏
လက်နက်များ နှုတ်ဆက်ခြင်း ... Internet Explorer ခေတ်ကုန်လာပြီ။
ဇွန်လ 22 2022
ထုတ်ဝေသည်	Paweł Czechowski
အင်တာနက်, Internet Explorer ကို, microsoft, ဘရောင်ဇာ
CS 1.6 တွင် အညှာအတာမဲ့ ဖျက်ဆီးတတ်သော အသက်ကြီးသူများ အပြည့်ရှိသော "အင်တာနက်အဟောင်း" ၏ သင်္ကေတအချို့ကို သတိရမိသည်၊ Neostrada 512 ၏ အဖြူနှင့် အပြာရောင် အသွင်အပြင်၊ Maxior နှင့် Milanos ဝဘ်ဆိုဒ် အပြင်အဆင်များ၊ ...
မင်းက ဘာစက်ရုပ်ကို ရူးနေတာလဲ။ စက်က ဟော့ဒေါ့တွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးတာလဲ။
ဇွန်လ 17 2022
အစားအသောက်, စက်ရုပ်, စက်ရုပ်, စျေးဆိုင်, နည်းပညာ
ဒီစာသားရဲ့ ခေါင်းစဉ်က "ဘာ peep၊ job?" ဒါမှမဟုတ် "What peo, machine?" လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီအမှုကို ရေးတဲ့လူအများစုက ဒီအတိုင်းသွားတယ်လို့ ကျွန်တော် သံသယရှိတယ်။ ပြီးတော့ ကိစ္စက ကြီးမားတယ် - စတိုးဆိုင်တွေရဲ့ Żabka ဆိုင်ခွဲ ...
တရုတ်အာကာသထဲမှာ အများကြီးပါပဲ။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည် ပိုမိုခိုင်မာသော ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များ ရှိသည်။
ဇွန်လ 11 2022
စစ်တမ်း, တရုတ်နိုင်ငံ, kosmos, နည်းပညာ
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်ရန် များစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အလွန်ခေတ်မီသောစစ်တပ်ကို စုစည်းပါ သို့မဟုတ် လက်ရွေးစင်တက္ကသိုလ်အချို့ကို ဖန်တီးပါ။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အားကစားစင်တာများစွာကို တည်ဆောက်ပါ။ တရုတ်တွေက သံသယရှိဖို့ ကြိုးစားနေတယ်..။
ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်ပရိုမိုးရှင်း & Translate
Editing & SEO အရာရှိချုပ်
SmartMe ဟာ Smart World မှာနေရာတစ်ခုပါ။ အသိဥာဏ်ရှိသောဖြေရှင်းချက်များမှနောက်ဆုံးသတင်းများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ၊ လမ်းညွှန်များနှင့်ကော်လံများကိုထုတ်ဝေသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာပေါ်တယ်။ တိုက်ခန်းများ၊ အိမ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဆေးရုံများနှင့်အခြားအရာများအတွက်စမတ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည့်ကုမ္ပဏီ။ ပိုလန်ရှိအကြီးဆုံးစမတ်ထုတ်ကုန်ဒေတာဘေ့စ။ စတိုင်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ကမကထ!
နောက်ထပ်ကြည့်ရန်: Xiaomi စမတ်အိမ် | Google home mini | Google အိမ် | Google home hub | Google စတိုး | အိမ်အကူ | Apple homekit ပါ | Xiaomi ရေနွေးအိုး | Xiaomi လေသန့်စင်စက် | Xiaomi air humidifier | blackhead ဖုန်စုပ်စက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း | Philips အထည်ချုပ်မီးသင်္ဘော | Silvercrest စက်ရုပ် | Xiaomi အိမ် | Zigbee
Xiaomi Smart အိမ်
Xiaomi Mi အိမ်မှ Aqara Hub
Google Home Assistant - အင်္ဂါရပ်အသစ်
Xiaomi ၏ Home Assistant
Home Assistant - Custom Component ထည့်ခြင်း
Xiaomi မူလစာမျက်နှာ App - ဒေသတွင်းပြောင်းလဲမှု
Aqara မှ Xiaomi HomeKit စမတ်ကျသောအိမ်
လူတိုင်းအတွက် Smart Home ဖြေရှင်းနည်းများ
© 2022 SmartMe။ မူပိုင်ခွင့်များ
သင်ကမ်ဘာကွီးထဲမ ၀ င်ခင်ကလစ်တစ်ချက်သာဝေးသည် SMART
အရေးကြီးချက် - ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies များကိုသုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် Cookies နှင့်အလားတူနည်းပညာများ အသုံးပြု၍ သိမ်းဆည်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည် ကြော်ငြာနှင့်စာရင်းအင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်။ ကြော်ငြာကုမ္ပဏီများ၊ သုတေသနကုမ္ပဏီများနှင့်မာလ်တီမီဒီယာလျှောက်လွှာပံ့ပိုးသူများသည်လည်း၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အင်တာနက်လည်ပတ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသောပရိုဂရမ်တွင်သင်သည် cookies များအတွက်ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကွတ်ကီးဆက်တင်များမပြောင်းဘဲအသုံးပြုခြင်းသည်စက်ပစ္စည်း၏မှတ်ဉာဏ်တွင်သူတို့သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။